Dare reParamende Roomesera Nhengo dzeMDC Dzinozvidza VaMnangagwa
Nhengo dzeparamende dzeMDC pamwe nedzakadzingwa mudare iri dzichabhadhariswa faindi yezviuru mazana mana zvemadhora emuno pamwe nekutorerwa madiplomatic passports kana dzikabatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, muparamende.
Nhengo idzi kubva kumatare eSeneti neNational Assembly, dzaiimba, kuramba dzakagara pasi kana kubuda mudare kana VaMnangagwa vapinda mudare.
Komiti yakaumbwa neparamende kuongorora kuita kwenhengo idzo yakatura gwaro rayo muSeneti ichiti nhengo zana negumi nesere dzeMDC, dzinofanira kubwata nemhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika uye dzinofanira kubhadhara zviuru mazana mana zvemadhora pamunhu.
Komiti iyi, iyo yaitungamirwa nemumiriri weMudzi South muNational Assembly, VaJonathan Smakange veZanu PF, inoti nhengo idzi dzinofanirawo kutorerwa maDiplomatic Passsports.
Komiti yaVaSamkange inoti mumiriri weMbizo, VaSettlement Chikwinya, avo vakadzingwa mudare svondo rapera,pamwe nemumiriri weZengeza West, VaJob Sikhala, vanofanira kubhadhara zviuru mazana masere zvemadhora emuno nekuti vakazvidza komiti iyi apo yaiita basa rayo.
Gwaro iri richazeiwa mumatare eSeneti neNational Assembly matare aya ozopa mutongo wawo.
Vakafanobata chigaro chemutauririri weMDC-T, VaWitnesss Dube, vati havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakaiswa musaga rimwe chete kunyange hazvo dzaive nenyaya dzakasiyana.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, vati nhengo dzebato ravo hadzina chadzakatadza nekuti bato ravo haribvumi kuti VaMnangagwa vakakunda musarudzo dza2018.
Vatiwo komiti yaVaSamkange yaive nenhengo dzeZanu PF chete zvionoreva kuti yaiita basa rayo ine divi rayakarerekera.
VaChikwinya vaudza Studio7 kuti kunyange vakabatwa nemhosva havasi kuzotambira kana kubhadhara faindi nekuti havana mhosva yavakapara.
Vatiwo vaigona kutambira izvi chete dai komiti iyi yaive nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende.
VaChikwinya vati komiti iyi iri kuda kuvaomesera zvakanyanya nekuti vakaudza nhengo dzayo kuti zvadzaiita zvainge zvisina maturo.
Vaikokera nhengo dzeMDC Alliance muparamende, VaProsper Mutseyami, vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi sebato voona kuti voita sei.
Pakaumbwa komiti yekuongorora nyaya iyi nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa eparamende, yeStanding Rules and Orders, nhengo dzeMDC Alliance mukomiti iyi dzakaramba kupinda mumusangano wacho izvo zvakazoita kuti ive nenhengo dzeZanu PF chete.
Amai Priscillar Misihairabwi-Mushonga avo vainge vadomwa kuve nhengo yekomiti iyi vakaramba kupinda mukomiti iyi.
Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzisa paUniversity of Zimbabwe, VaLovemore Madhuku, vaudza Studio 7 kuti kunyange nhengo dzeMDC idzi dzikabatwa nemhosva dzinokwanisa kupikisa mutongo wadzo kumatare edzimhosva.
Pane nenhengo dzinodarika makumi mana dzakatodzingwwa muparamende kubva kuSeneti neNational Assembly nekuda kwemakatamwa ari muzvikwati izvi uye VaMadhuku vati paramende inogona kunetseka kuona kuti vakadzingwa ava vatevedza mutongo wayo.
Zvose izvi zvinoitika apo MDC Alliance iri kuti Zanu PF iri kuronga kuparadza bato iri ichishanda nemamwe mapato.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muMDC Alliance.
Vakadzingwa muparamende vari kunziwo vadzorere motakari dzavakapihwa nechikwereti neparamende sezvo mota idzi dzichinzi dzaifanira kushandiswa pabasa reparamende.